छ वर्षपछि मर्मत हुँदै धुलिखेल–सिन्धुली सडक - नेपालबहस
छ वर्षपछि मर्मत हुँदै धुलिखेल–सिन्धुली सडक
| ११:५८:४८ मा प्रकाशित
२८ फागुन,काठमाडौं । निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएको झण्डै छ वर्षपछि धुलिखेबाट सिन्धुली हुँदै बर्दिवाससम्मको सडकमा धेरै खण्डमा मर्मतको काम अघि बढेको छ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका० ले निर्माण गरेको सो सडकमा अहिले आकस्मिक, पटके र नियमित मर्मतसँगै कालोपत्रको तह थप्ने काम ९ओभरले० र ‘सिङ्गल सर्फेस ट्रेसिङ’ समेत अघि बढेको छ ।
नेपालथोकदेखि धुलिखेलसम्मको सडकमा ‘सिङ्गल सर्फेस ट्रेसिङ’ १० किमी सकिएको र बाँकी १० किमी आगामी चैतमा सकाउने लक्ष्य लिइएको आयोजनाले जनाएको छ । नेपालथोक खुर्कोट सडकमा चालु आवमा २५ किमी ओभरले गर्ने योजना बनाइएको छ । त्यसमध्ये पाँच किमी सकिएर २० किमी सडक ‘ओभरले’ का लागि ठेक्का भइसकेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यो वर्ष ठेक्का भए पनि अर्को वर्ष मात्रै काम सकिनेछ ।”
साहित्य सङ्गमद्धारा सात स्रष्टा सम्मान ७ घण्टा पहिले
सिमकोटमा हेड नेपालको आवासीय स्रोत केन्द्र उद्घाटन १२ घण्टा पहिले
राष्ट्रपतिले वैशाख १ मा ४५२ लाई विभूषित गर्ने ५ दिन पहिले
देशभरका निकुञ्जमा गैँडा बढेको खुसियालीमा दीपप्रज्वलन ४ दिन पहिले
बाइडन किमलाई भेट्न अइच्छुक : ह्वाइट हाउस २ हप्ता पहिले
पटक–पटक सुझाव दिँदा पनि सुध्रिएनन् मासु पसल ७ दिन पहिले
आजदेखि जग्गाको नक्सा अनलाइनबाटै प्रिन्ट गर्न सकिने १५ घण्टा पहिले
महिला आयोगको वक्तृत्वकला प्रगियोगितामा भुजेल प्रथम २ महिना पहिले
म्युजिक भिडियो ‘खुशी’ सार्वजनिक (भिडियो) १ महिना पहिले
हनुमन्ते करिडोरको काम तत्काल रोक्न निर्देशन, निर्माणकार्य अवरुद्ध २ वर्ष पहिले
के तपाईलाई थाहा छ ? रुघाखोकीको भाइरसले मूत्रथैलीको क्यान्सर निको पार्न सक्छ ! २ वर्ष पहिले